Ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-enweghị ego maka ezigbo ego
Isi > Ahịa nke ndị na-ere ahịa > Ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-enweghị ego maka ezigbo ego
23.12.2016 · 42 · Ntinye niile maka December 2016
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enweghị itinye ego na ezigbo ego ruo n'oge na-adịbeghị anya, mgbe ị hụrụ otu isiokwu yiri nke a, onye ọ bụla maara ụlọ ọrụ a ga-eche na nke a bụ ihe ọzọ onye mgbasa ozi na-akpọsa ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm ọzọ na-ejighị ihe ruru unyi. Ma na nhọrọ ọnụọgụ abụọ bịara n'oge ọhụrụ ma ugbu a mmalite dị otú ahụ na nhọrọ ọnụọgụ abụọ aghọwo ezigbo ekele n'ebe saịtị kachasị amasị anyị Bopt.org. Kedu ka a ga - esi mee nke a gụọ n'akwụkwọ ọhụrụ anyị ....
N'ezie, onye ọ bụla ga-achọ na-agbalị onwe m na ọnụọgụ abụọ nhọrọ, ọ dịghị ize ndụ. N'ezie ka a zụọ na-agụ ozizi na ahia na a ngosi akaụntụ a-akpali nnọọ mmasị, ma ha niile nwere otu isi drawback - mgbe ha na-arụ ego anaghị abata na ore akaụntụ na, ya, na ọ nwere ike ghara ghọtara, na n'ụzọ ụfọdụ na-eji.
Ndị otu anyị enweghị ike ikwe ka ọnọdụ a gaa n'ihu, anyị chere banyere ihe a ga-eme na otu esi enyere ndị ahịa anyị aka ịmalite nhọrọ ọnụọgụ abụọ n'enweghị ego. Nhọrọ, n'ezoghị ọnụ, e nwere ntakịrị, karịa kpọmkwem 2:
Enweghi ego ego site n'aka onye nlekota nke nhọrọ ọnụọgụ abụọ
Nkwụghachi nke nkwụnye ego site n'aka onye ọrụ ibe - nzaghachi
Ihe nkwụnye ego ọ bụla site n'aka onye na-ere ahịa nke ọnụọgụ nhọrọ dị njọ n'ihi na ndị na-ere ahịa adịghị adịkarị, ma ọ bụrụ na a na-eme ya, mgbe ahụ, a na-enye ọtụtụ ndị mmachi iwu dịka:
ihe a chọrọ iji gbanyere ego iji nweta ego na ego a ga-akwụ ụgwọ, ọ na-abụkarị 40-50 ugboro nke ego ahụ n'onwe ya;
a machibidoro ịchụpụ ego, ọ bụrụgodị na onye ahịa ahụ na-etinye ego na ezigbo ego, ruo mgbe a rụpụtara ego ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị ego site na akaụntụ onye na-ere ahịa.
Ọ bụ ya mere anyị ji ruo nkwubi okwu na ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ihe anyị na-azụ ahịa magburu onwe ọnọdụ maka mmalite, ọ dị mkpa ime ha leystvitelno magburu onwe enweghị ihe ọ bụla na ọnọdụ na ihe mgbochi, na ọnụọgụ abụọ nhọrọ na-enweghị etinye ezigbo ego na-kpọmkwem ihe e kwuru na nkebi okwu a .
Anyị kwurịtara na otu n'ime ndị na-ere ahịa site na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ nke onye na-agba ahia Finmax ma kweta na onwe anyị, n'enweghị enyemaka ego nke onye na-ere ahịa, ga-alaghachi nkwụnye mbụ nke $ 100 na ndị ahịa anyị! Ezigbo ego ahụ dum, n'agbanyeghị ụgwọ ọrụ gị na ezigbo ego na usoro ịkwụ ụgwọ Webmoney.
Ugbu a, ka anyị lee nkọwa zuru ezu na nzọụkwụ site na nzọụkwụ na-ele anya otú usoro ọrụ anyị ga-esi mee mgbe nlọghachi nke nkwụnye ego mbụ iji weghachite nkwụnye ego mbụ gị na ezigbo ego:
Debanye aha na onye na-ere ahịa Finmax njikọ a
Zigara na e-mail anyị info@bopt.org aha gị iji nyochaa ndebanye
Nweta akwukwọ nkwado n'aka anyị banyere itinye aka na mmemme ahụ
Mee nkwụnye ego kacha nta - 100USD - buru n'uche na naanị anyị ga-akwụghachi ego ntinye ego 100 (ị nwere ike itinye ego na 500 dollar, ma anyị ga-alaghachi otu ihe ahụ naanị 100)
Dịkarịa ala, azụmahịa 5 na nhọrọ ọnụọgụ abụọ na onye na-ere ahia Finmax
Tinye maka nkwụnye ego site na e-mail info@bopt.org na ngosipụta nke obere akpa na webmoney.
Nke ahụ bụ n'ezie ihe niile a chọrọ ime. Ntuziaka 6 kachasị mfe na ike ịmalite nhọrọ ọnụọgụ abụọ n'enweghị mgbakwụnye - nke gị!
A na-akwụghachi ego ahụ n'ime otu ọnwa mgbe e mechara nkwụnye ego ahụ. Ọ bụrụ na ị debe na December, ị ga-enweta nkwụghachi na Jenụwarị na na. Mgbe ị rụchara ọrụ azụmahịa 5, ị nwere ike ime ya na nkwụnye ego ọ bụla ịchọrọ - ahia na ma nweta ọnụọgụ ọnụọgụ, ma ọ bụ site na njirimara na onye na-ere ahịa Finmax ma wepu ego ha. Ị ga-enweta nkwụnye ego ọ bụla n'agbanyeghị ihe ị na-eme na-esote. Ya mere, maka oge mbụ n'ime nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke ụlọ ọrụ na-enweghị ego maka ezigbo ego wee dị! Soro n'usoro ihe omume anyị ma nweta nhọrọ ọnụọgụ abụọ!
Tinye akwụkwọ a na ibe edokọbara ma gaa na ya kwa oge n'ihi na a ga-enwe ozi gbasara ohere nkwụnyeghachi na site na ndị ọzọ na-ere ahịa.
Deutsche Bank na United States kwadoro ọnụahịa ha
Ntụle bụ isi na December 22
Ihe ndị ọzọ si na ụdị "Brok Brokers"
Ngwuregwu site n'aka onye ahịa broker Binomo na ego nrite nke 1 nde - New Horizons
Egwuregwu si na Binomo brokka na ihe nrite ...
Nhọrọ nhọrọ maka ndị ahịa ọhụrụ! Were oge ahụ!
Free nhọrọ maka ọhụrụ ...
Ịkwalite ọnwa site na Migesco
Nkwalite ọnwa site na MigescoRate nke a post ...
100% nkwụnye ego na ezigbo ego. Ihe Omume Ọhụrụ site na Bopt.org na Investory.biz!
100% nkwụnye ego nkwụghachi n'ezie ...
07.05.2016 · 0
Onyinye ruo 12000 rubles naanị iji megharịa akaụntụ ahụ tupu 15 May
Onyinye ruo 12000 rubles maka ...
Mkparịta ụka: 42 kwuru
Tupu nke ahụ, m zụrụ azụ ma mepụta rịọ naanị site na akaụntụ ngosi. Enwere m obi ụtọ na m nwetara ezigbo uru n'enwetaghị ego. Nye m, maka onye ahia azụ - nhọrọ kachasị mma, ka ntinye mbụ ahụ abụghị elu igwe. Anyị ga-agba mbọ iso ụmụnna rụọ ọrụ ahụ - ha achọọ ịzụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ. Ee, na onye na-ere ahịa bụ onye mmekọ a pụrụ ịdabere na ya, yana nzaghachi nkịtị.
Onye ahịa maara ihe gwara ya ka o kere òkè n'omume a. Enweghi m oge ọ bụla, m jupụtara na nkwụnye ego maka 100 $ ma kwenye na m ghọrọ onye so na ihe omume ahụ. Ugbu a, ana m esite na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, na January, m ga-eche maka nloghachi nke nkwụnye ego ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọnụọgụgụ ahụ adịghị oke nke na ị gaghị anwale ikike gị na ike gị na azụmahịa ọhụrụ, gịnị bụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka m.
Nkwalite magburu onwe ya maka onye ọ bụla chọrọ ịnwale onwe ya na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Mụ na ndị enyi na-atụle isiokwu a ogologo oge, ma ọ dịghị anwa - achọghị ka ego funahụ. Gụọ ntuziaka maka nlọghachi nke nkwụnye ego - enweghị ajụjụ kpatara. N'ọdịnihu dị nso anyị na-eme atụmatụ ịmalite site na nke kachasị nta, mgbe ahụ anyị ga-ahụ. Daalụ maka saịtị dị ebube Bopt.org na onye na-ere ahịa Finmax maka ohere dị otú ahụ.
Ugbu a edebanye aha na onye na-ere ahia ma mejupụta ego ahụ na ego kachasị elu. Enweghị m ike ịkpọ onwe m nhọrọ nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ma enweghị m ike ịjụ itinye aka na ngwaahịa dị mma. Usoro nkwụsị nke nkwụghachi ego n'ezie bụ nnọọ ihe doro anya ma doo anya. Enwere m olile anya dị ukwuu na n'ime ihe omume niile ga-agabiga n'enweghị nsogbu. Enwere m olileanya ịnọgide na-akwado onye na-ere ahia a n'ọdịnihu.
Ezi aro, karịsịa maka ịmalite ịhọrọ ọnụọgụ abụọ. Ohere nke nkwụghachi azụ ga-adọta ndị ahụ na-achọghị itinye ego nke aka ha egwu ma na-atụ egwu ịlafu ọbụna obere ego na ndị ahịa. M na-akwado nkwado ndị dị otú ahụ bara uru nke ga-enyere aka gbanwee ndụ nke ọtụtụ ndị maka naanị mma. Enwere m ọṅụ na m ga-ewepụta onwe m ma kpọọ ndị enyi. Gbalịa ma nweta - ihe niile dị n'aka gị. Enwee ihu ọma na nnukwu uru na ọnụọgụ nhọrọ nhọrọ.
Isiokwu maka m bụ ihe ọhụrụ, ma na-akpali mmasị. Ọ dị mkpa ịnwale.
Ana m eji nlezianya gụọ isiokwu gbasara nhọrọ ọnụọgụ abụọ n'ejighị ego nye ezigbo ego ma na mbụ m na-enwe obi abụọ banyere aghụghọ ọzọ. Otú ọ dị, ego kachasị ego abụghị nnukwu, n'ihi ya ekpebiri m ịnwale ya otu. N'ọdịnihu dị nso m na-atụ anya nkwụghachi ego - Enwere m olileanya na Finmax agaghị ahapụ gị. N'ọnọdụ ọ bụla, a natawo uru site na mbụ amụọ!
Echere m na mụ onwe m bụ onye ahịa azụmaahịa n'ahịa, ma enwebeghị m ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ n'enweghị itinye ego na ego. N'okwu ahụ, a kọwara ihe niile n'ụzọ doro anya na ọ dịghị "nkume" n'okpuru mmiri. Aga m agbalịa ma ọ dịkarịa ala n'ihi mmasị ịkere òkè na ihe a na-adịghị ahụkebe. Na maka ndi nmalite - ya mere, ihe kacha mma iji nwalee onwe gi n'enweghi ego obula.
Nloghachi nke nkwụnye ego bụ echiche dị oke mma, echere m, a ga - ekepụta ọnọdụ niile maka ịmalite mmalite. M ga - amụ banyere akaụntụ ngosi maka ugbu a, ọ bụrụ na ọ na - arụ ọrụ, mgbe ahụ m ga - eme ya.
Obi dị m ụtọ
Na-eche echiche, anyị ga-anwale aka anyị na azụmahịa ọhụrụ, ka a na-akwụghachi ego ahụ, ihe ize ndụ ndị dị ntakịrị ma bụrụ ndị ezi omume.
Ndị na-asị na ojoro a, ọ dịtụghị mgbe ọ gbalịrị ịghọta ọrụ nke atụmatụ ahụ. Ha enweghị ike ịghọta ihe okwu a bụ "nhọrọ ọnụọgụ abụọ", "ụzọ abụọ", "egosi", wdg. Na mbụ, egwu, na ihe ndị ọzọ.
Ma mgbe ahụ, m mụtara, ọ rịgoro n'elu ugwu ahụ. Ọ bụghị nde nde, ma 100-150 $ kwa izu ana m eziga.
Mụ onwe m kwa aghọtaghị ihe okwu ndị a pụtara, mana ọtụtụ ndị enyi na-arụ ọrụ n'Intanet ma na-etinye aka na nhọrọ ọnụọgụ abụọ, achọkwara m itinye aka na ịmalite ime ego
Jiri nlezianya gụọ isiokwu na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Ee, na enweghị ego, maka ezigbo ego. Na mbụ, echere m na nke a bụ mgbasa ozi ọzọ. Otú ọ dị, ego kachasị ego abụghị nnukwu, ekpebiri m ịnwale ya.
M bụ onye ahịa na-amalite ahịa na mbụ na-eme ihe ngosi na mwepụ dị ka ihe niile na-apụ. Ugbu a, m na-eche ịtụba ego ego 100 ma gbalịa ịkpata ego obere ego.
Daalụ maka ozi bara uru ma dị mkpa. M ga-amụ ma gbalịa, enwere m olileanya na ihe niile ga-apụ
Ozi ọma! Ruo ogologo oge, achọrọ m isonye na nhọrọ ọnụọgụ abụọ, mana echeghị m. Ugbu a, na ohere dị otú ahụ, m ga-anwa anwa anwa, ọ dịghịkwa ihe ize ndụ na nsacha nwere ike ọ gaghị adị njọ, ya mere, m bụ IHE!
N'ezie, nhọrọ abụọ maka ịbanye nhọrọ nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ ihe mara mma. Na mbụ, ị dị ka nwa mpi. Ọfọn, nke abụọ bụ ezigbo ohere iji nweta ego dị mma n'enweghị ihe ize ndụ nke ịnwụ ego.
nwekwara mmasị nke abụọ nhọrọ, ọ dị mkpa vnikat.spasibo maka nkọwa zuru ezu.
Ndebanye aha, mere nkwụnye ego mbụ na 5000 r. Na ọbụna ugbua akwụ obere! Ukwu!
Echere m na na-enweghị ego ị ga-enweta ihe ọ bụla! Nke ahụ bụ mgbe ị na-eweta ụfọdụ ego mgbe ị nwere ike ịzọpụta ihe!
Otu isiokwu dị ezigbo ụtọ bụ ego.
Na mgbe ha gwara gị na ọ dị mfe ịnweta ego, ọ ka mma.
Daalụ maka Ama!
M kpebiri ịnwale, were ohere, debanye aha, malite na nke kacha nta, na mberede na ihu ọchị, chọrọ ka m nwee obi ụtọ, ka anyị gaa!
Ezi aro, anyị aghaghị ịnwale. Enwere m mmasị na nhọrọ nke abụọ.Ekele gị maka ozi ahụ!
Ezi aro, karịsịa maka ịmalite ịhọrọ ọnụọgụ abụọ. Ọ dị mkpa ime m echere na ihe niile ga-apụ.
Sam ama odomo ime ebe a ma o nweghi ihe merenu.
Ndị enyi na-adụ ọdụ. Echere m na ọ bara uru ịnwale. Nke a bụ ntụziaka dị mma, ma ọ bụrụ na ị na-eche nke ọma banyere usoro ahụ.
M mma Olympus ahia m ahia ugbua 2 otu ọnwa m na-amasị ha ikpo okwu, M na-arụ ọrụ ngwa ngwa ịdọrọ ego mgbe niile na-enweghị nsogbu.
Ụzọ dị mma iji nweta ego na Intanet. Achọrọ m ịkpata nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
ọ dị ezigbo mma na ịkwesighi ka ị ṅụọ ezigbo ego, na e nwere ihe nkwụnye ego eji laghachi azụ. Echere m ekele maka atụmatụ a, ọtụtụ ndị ga-anwa ike ha.
Ihe omuma nke di omimi, enweghi m ugbua izute ụdị omume a.
ihe bara ezigbo uru na nke kachasị mkpa, ma e wezụga ya, a na-enye ya otu ụdị ọrụ ahụ dị iche iche !!! Ugbu a, m ga-anwa ime ego, enwere m olileanya na ọ ga-apụ !!!
Nhọrọ! Ee, ma na-enweghị ego ahụ bụ ihe dị ọhụrụ. Ọ dị mkpa ịnwale, na mberede na eziokwu.
Nke ahụ bara uru n'ezie, niile na shelves. N'ikpeazụ, echere m ya!
Isiokwu ahụ nwere ọgụgụ isi na-akọwa otú ị nwere ike isi mee ego na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Ị nwere ike ịnwale ego na nke a.
Asụsụ ederede ederede, na ọ bara uru. Na-akwanyere onye edemede ahụ ùgwù!
Nke a abughi oge mbụ m ga-enweta isiokwu nke nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Mana onwe m etinyeghị ihe ize ndụ, enwebeghị m ihe ọmụma zuru oke na ntụziaka a. Isiokwu a gbakwụnyere ihe omuma nye ihe omimi m ma nwee mmetụta na-akpali akpali.
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka ezigbo ego na-enweghị ego ga-ekwe omume. Isiokwu a na-egosi na nke a bụ n'ezie!
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ, ị ga-enwe ike ịbanye na ntanetị.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka ezigbo ego na-enweghị ego. Onye ọ bụla nwere ike iji ozi sitere na isiokwu a ma nweta na Ịntanetị.
Anyị na-amụta, anyị na-enweta ahụmahụ ma na-enweta ego na ọnụọgụ abụọ na-enweghị ego. Naanị n'ụzọ dị otú a ị nwere ike nweta ezigbo ego na Ịntanetị
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka ezigbo ego - nke a bụ ezigbo. Onye ọ bụla chọrọ ịnye ego na Ịntanetị, ị nwere ike ịnwale ụzọ e dere na isiokwu ahụ!
Daalụ maka nnukwu saịtị ahụ, ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enweghị ego ịkwụsị ego nyeere m aka ịmalite inweta ego
Ndị mba ọzọ na-arịwanye elu na akụ na ụba China
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ na nkwụnye ego kacha nta